Inbox ရဲ့ သေဆုံးချိန်ကို ကြေညာလိုက်တဲ့ Google
17 Sep 2018 . 2:42 PM
Google Gmail ကို လူတိုင်းအသုံးပြုနေကြပြီးဖြစ်မှာပါ။ တကယ်လို့ Mobile မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Web Browser မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Google ကနေပဲ Gmail အတွက် Client တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Google Inbox ကိုလည်း အသုံးပြုဖူးတဲ့သူတွေရှိလောက်ပါတယ်။ အဆိုပါ Google Inbox ဟာ Google ရဲ့ နှစ်တွေကြာမြင့်တဲ့အချိန်အထိ ဒီဇိုင်းပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့ Gmail အစားထိုး အသုံးပြုစရာအနေနဲ့ ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Google ဟာ ဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာ Gmail ကို အကြီးစားဒီဇိုင်းပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ Gmail ကို Inbox နဲ့ ပိုပြီး တူညီအောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစတင်ပြီးတော့ Gmail အတွက် Inbox ကို အသုံးပြုစရာမလိုတော့သလိုတောင် ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
အခုအချိန်မှာတော့ Google ရဲ့ Product Manager ဖြစ်တဲ့ Matthew Izatt ကနေ Google Inbox ကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်တော့မှာမဟုတ်ဘဲ လာမယ့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လကုန်မှာ Inbox ကို အသုံးပြုမှာမဟုတ်တော့ဘူး လို့ ပြောကြားလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် သက်တမ်း ၄ နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတဲ့ Google Inbox ဟာ Gmail ကို မကျော်နိုင်တော့ဘဲ သေဆုံးတော့မှာပါ။
ဒါပေမယ့်လည်း ယခင်တုန်းက Google Inbox က Gmail ကနေ ခွဲထွက်ခဲ့တဲ့ Feature တွေဖြစ်တဲ့ Smart Compose ၊ Nudges နဲ့ Email Snoozing လိုမျိုး Feature တွေကလည်း အခုအချိန်မှာ Gmail မှာပါ ရရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက် Inbox ကိုအသုံးပြုဖို့ သီးသန့် အကြောင်းပြချက်မရှိတော့တာကလည်း Google အတွက်တော့ Inbox ကို သတ်ပစ်ဖို့လွယ်ကူသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
Akhayar ပရိသတ်ကြီးထဲမှာရော Google Inbox ကို အသုံးပြုနေတဲ့သူတွေရှိကြပါသလား?
Google Gmail ကို လူတိုငျးအသုံးပွုနကွေပွီးဖွဈမှာပါ။ တကယျလို့ Mobile မှာပဲဖွဈဖွဈ Web Browser မှာပဲဖွဈဖွဈ Google ကနပေဲ Gmail အတှကျ Client တဈခုဖွဈတဲ့ Google Inbox ကိုလညျး အသုံးပွုဖူးတဲ့သူတှရှေိလောကျပါတယျ။ အဆိုပါ Google Inbox ဟာ Google ရဲ့ နှဈတှကွောမွငျ့တဲ့အခြိနျအထိ ဒီဇိုငျးပွောငျးလဲခွငျးမရှိတဲ့ Gmail အစားထိုး အသုံးပွုစရာအနနေဲ့ ရှိနခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ Google ဟာ ဒီနှဈအစောပိုငျးမှာ Gmail ကို အကွီးစားဒီဇိုငျးပွောငျးလဲမှုတှပွေုလုပျခဲ့ပွီးတော့ Gmail ကို Inbox နဲ့ ပိုပွီး တူညီအောငျ ဆောငျရှကျခဲ့ပါတယျ။ အဲ့ဒီအခြိနျကစတငျပွီးတော့ Gmail အတှကျ Inbox ကို အသုံးပွုစရာမလိုတော့သလိုတောငျ ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
အခုအခြိနျမှာတော့ Google ရဲ့ Product Manager ဖွဈတဲ့ Matthew Izatt ကနေ Google Inbox ကို ဆကျလကျဆောငျရှကျတော့မှာမဟုတျဘဲ လာမယျ့ ၂၀၁၉ ခုနှဈ မတျလကုနျမှာ Inbox ကို အသုံးပွုမှာမဟုတျတော့ဘူး လို့ ပွောကွားလိုကျပွီဖွဈပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ သကျတမျး ၄ နှဈလောကျပဲရှိသေးတဲ့ Google Inbox ဟာ Gmail ကို မကြျောနိုငျတော့ဘဲ သဆေုံးတော့မှာပါ။
ဒါပမေယျ့လညျး ယခငျတုနျးက Google Inbox က Gmail ကနေ ခှဲထှကျခဲ့တဲ့ Feature တှဖွေဈတဲ့ Smart Compose ၊ Nudges နဲ့ Email Snoozing လိုမြိုး Feature တှကေလညျး အခုအခြိနျမှာ Gmail မှာပါ ရရှိနပွေီဖွဈတဲ့အတှကျ Inbox ကိုအသုံးပွုဖို့ သီးသနျ့ အကွောငျးပွခကျြမရှိတော့တာကလညျး Google အတှကျတော့ Inbox ကို သတျပဈဖို့လှယျကူသှားတာဖွဈပါတယျ။
Akhayar ပရိသတျကွီးထဲမှာရော Google Inbox ကို အသုံးပွုနတေဲ့သူတှရှေိကွပါသလား?